“Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazonan’i Kristy Jesosy ahy”
Feno fahatsorana sy vaovao hatrany ny fanandramana nolalovan’ny kristianina tamin’ny vao nitiavany; fa rehefa nihamaro kosa ny tombontsoany dia nitombo ny fanandramany sy ny fahaizany. Tsy maintsy matanjaka izy mba hizakany ny andraikiny, ary tokony hifanaraka amin’ny tombontsoany ny fahamatorany.
Raha tsy misy fianteherana amin’i Kristy dia hifarana amin’ny fahatokian-tena sy ny fanamarinan-tena ny fitomboan’ny fahalalana sy ny tombontsoa rehetra. Sao hadinon’ny tanora kristianina fa i Kristy no nanao ny asa tsara tao anatiny, ary i Kristy ihany koa no tsy maintsy mamarana azy. Tsy maintsy hialan’ny fanahy ny fahamendrehana rehetra ary mitoky tanteraka amin’ny fahamendrehan’ilay manam-pahendrena fatratra izy, izay tsy ho diso mihitsy. Tsy mahavita na inona na inona ny olon-tokana. Izao no namabaran’i Jesosy: “Raha misaraka Amiko kosa ianareo, dia tsy mahay na inoa na inona” Jao. 15:5. Tokony hitsahatra eo amin’Andriamanitra ny fanahy.
Nidina tety an-tany ny lanitra iray manontolo tamin’ny nanolorana an’i Kristy ho fanomezana. Ary tamin’ny alalan’i Kristy no nampanantenaina ny Fanahy Masina ho an’ny mpino. Izao no nolazain’i Jesosy tamin’ny mpianany: “Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo” Jao. 14:26. Tsy vitan’ny hoe nanolotra famelan-keloka ho amin’ny fanahy mino sy mibebaka fotsiny ihany i Kristy, fa nampanantena ny fanomezan’ny Fanahy Masina izay hitoetra hatrany ihany koa.
Rehefa mitombo ao anatin’ny tany ny voa dia tsy hitan’olombelona ny fomba fiasan’ireo singa mampivelatra ilay zava-maniry ho amin’ny fahatanterahana, ka ipoiran’ny tsiriny voalohany, avy eo ny tahony, ary tonga katsaka ao anitin’ny tranony amin’izay. Na dia zazavao amin’ny finoana aza ianao dia fantatrao fa niala avy amin’ny fahafatseana ho amin’ny fiainana, raha toa ka miasa eo amin’ny fiainanao ny vokatry ny Fanahy. Raha toa ka mitombo amin’ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ianao dia ho hitanao fa mihamazava ny fomba fijerinao ara-panahy. Raha mahita fifaliana amin’ny fitoerana ao anatin’ny drafi-pamonjena ianao, amin’ny fisehoana be voninahitry ny toetran’ny Avo Indrindra, raha toa ny fonao ka mamiratry ny fisaorana sy ny fifaliana vokatry ny fifantohana amin’ny fitiavan’Andriamanitra , dia ho azonao antoka fa efa nohazavain’ny taratry ny Fanahy Masina izany ianao ary manandratra anao ho amin’ny fahamatoran’ny fiainana maha-kristianina ny iraky ny lanitra. ST, 27 Mar. 1893.